1 Mashruuca dhismaha shabakada korontada iyo dayactirka.
2 Mashruuca dayactirka dawlada hoose ee magaalada.
3 Dhismaha garoonka diyaaradaha.
4 Beerta warshadaha, dhismaha tuulada.
5 Wadada taraafikada iyo dhismaha injineernimada buundada
Hore: Carbon fiber-laba-tubbo isku xira
Xiga: Rullaluistemadka fiber kaarboon